Ny vesatry ny ota mavesatra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ny vesatry ny ota
Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana no ahafahan'i Jesosy milaza fa malemy fanahy ny ziogany ary maivana ny enta-mavesany raha jerena ny niaretany tamin'ny maha Zanak'Andriamanitra nateraka teto an-tany?
Teraka tamin’ny maha Mesia naminany azy i Heroda Mpanjaka, fony izy mbola zazakely. Nasainy novonoina ny zazalahy rehetra roa taona no midina tao Betlehema. Niatrika fakam-panahy rehetra i Jesosy tamin’izy mbola tanora, toy ny tanora rehetra. Rehefa nanambara tao amin’ny tempoly i Jesosy fa nohosoran’Andriamanitra izy, dia noroahin’ny olona tao amin’ny synagoga niala tao an-tanàna izy ary niezaka nanosika azy teo ambonin’ny sisiny. Nilaza izy fa tsy manana toerana hametrahana ny lohany. Nitomany mafy izy teo anatrehan’ny tsy finoan’i Jerosalema malalany, ary nanevateva sy nanontaniana ary nesoin’ireo mpitondra fivavahana tamin’ny androny. Nantsoina hoe zaza tsy ara-dalàna izy, mpiboboka divay, mpanota, ary mpaminany sandoka misy demonia mihitsy aza. Nandritra ny androm-piainany dia niaina tamin'ny fahalalana izy fa indray andro any dia hamadika ny namany izy, hilaozan'ny miaramila, kapohina ary hofantsihana amin'ny fomba feno habibiana. Indrindra indrindra, fantany fa ny anjarany dia ny hitondra ny ota maharikoriko rehetra ataon’ny olombelona mba ho sorompanavotana ho an’ny olombelona rehetra. Na dia teo aza izay rehetra tsy maintsy niaretany, dia nanambara toy izao izy: “Malemy ny ziogako, ary maivana ny entako.” (Matio. 11,30).
Mangataka antsika hanatona Azy i Jesoa mba hahita fitsaharana sy fanamaivanana amin’ny vesatry ny fahotana. Andinin-teny vitsivitsy talohan’io no nilazan’i Jesosy hoe: “Ny zavatra rehetra dia efa nomen’ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray ihany; ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana izany” (Mat 11,27).
Mahita ny enta-mavesatry ny olona izay nampanantenain’i Jesosy fa hanamaivana isika. Asehon’i Jesosy amintsika ny tena endriky ny fon’ny ray rehefa manatona azy amin’ny finoana isika. Manasa antsika ho amin’ny fifandraisana akaiky sy tonga lafatra izay mampiray azy irery amin’ny Ray izy, ka ao anatin’izany no ahafantarana fa tia antsika ny Ray ary tsy mivadika amintsika mandrakariva amin’izany fitiavana izany. “Fa izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, fa Hianao no hany Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy nirahinao” (Jaona 1.7,3Imbetsaka nandritra ny androm-piainany, i Jesosy dia nisy fanamby mba hanohitra ny fanafihan’i Satana. Niseho tamin’ny fakam-panahy sy ny fahoriana ireo. Saingy nitoetra ho mahatoky tamin’ny iraka masina nataony Izy mba hamonjy ny olona na dia teo amin’ny hazo fijaliana aza rehefa nizaka ny heloky ny olombelona rehetra. Teo ambanin’ny vesatry ny ota rehetra, Jesosy, amin’ny maha-Andriamanitra azy sy amin’ny maha-lehilahy ho faty azy, dia naneho ny fandaozan’ny olombelona azy tamin’ny fiantsoana hoe: “Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? Matio (27,46).
Ho mariky ny fahatokiany tsy azo hozongozonina amin’ny rainy, dia hoy izy taloha kelin’ny nahafatesany: “Ray ô, andidiako ny fanahiko ho eo an-tananao!” (Lioka 23,46) Nomeny antsika ny fahatakarana fa ny Ray dia tsy nandao azy na oviana na oviana, na dia tamin’izy nitondra ny enta-mavesatry ny fahotan’ny olombelona rehetra aza.
Jesosy dia manome antsika ny finoana fa tafaray aminy isika amin'ny fahafatesany, fandevenana azy ary fitsanganana amin'ny maty ho fiainana mandrakizay. Amin'ny alalàn'izany dia mahatsapa fiadanan-tsaina sy fahalalahana marina isika amin'ny ziogan'ny fahajambana ara-panahy izay nentin'i Adama tamin'ny Fahalavoana.
Nolazain’i Jesosy mazava tsara ny tanjona sy tanjona nahatongavany teto amintsika: “Nefa tonga Aho hanome azy fiainana, dia fiainana amin’ny fahafenoany rehetra” (Jao.10,10 Fandikan-teny Genève Vaovao). Ny fiainana ao anatin’ny fahafenoana dia midika fa naverin’i Jesosy ho antsika ny tena fahalalana marina momba ny toetran’Andriamanitra, izay nampisaraka antsika taminy noho ny ota. Fanampin’izany, dia nanambara i Jesosy fa “ny taratry ny voninahitry ny Rainy sy ny endrik’ny toetrany” izy (Hebreo). 1,3). Ny Zanak’Andriamanitra dia tsy maneho ny voninahitr’Andriamanitra fotsiny, fa Izy mihitsy no Andriamanitra ary mampita izany voninahitra izany.
Enga anie ianao manaiky ny Ray, Zanany, amin'ny fiarahana amin'ny Fanahy Masina, ary tena hahita izany amin'ny fiainana feno feno fitiavana, izay nomaniny ho anao hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao!